Zvikonzero zvinomwe zvekuchenesa yako Email Rondedzero uye Maitiro Ekuchenesa Vanyoreri | Martech Zone
Zvikonzero zvinomwe zvekuchenesa yako Email Chinyorwa uye Maitiro Ekuchenesa Vanyoreri
Muvhuro, March 19, 2018 China, Gunyana 24, 2020 Douglas Karr
Tiri kutarisa zvakanyanya kushambadzira kweemail nguva pfupi yadarika nekuti tiri kunyatsoona matambudziko mazhinji muiyi indasitiri. Kana mukuru anoramba achikushungurudza pane yako email runyorwa kukura, iwe unonyatsoda kuvanongedzera kuchinyorwa chino. Icho chokwadi ndechekuti, yakakura uye yakakura yako email rondedzero, iyo inogona kukuvara zvakanyanya iyo inogona kunge iri kune yako email kushambadzira kushanda. Iwe unofanirwa, pachinzvimbo, tarisa pane vangani vanyoreri vanoshanda iwe pane yako runyorwa - iwo anodzvanya kana kutendeuka.
Zvikonzero zvekuchenesa yako Email Chinyorwa
Mukurumbira - ISPs inovhara kana kuisa yako email mune junk folda zvichienderana nehurombo IP kutumira mukurumbira. Kana iwe uchigara uchitumira kune dzakaipa email kero, izvo zvinokanganisa zita rako.
Kudhara - Kana mukurumbira wako uri murombo zvakakwana, ese email yako inogona kuvharirwa.
Revenue - Kana mamwe maemail ako ari kuigadzira kuinbox nevashandi vanoshanda, izvo zvinounza mari zhinji.
mutengo - Kana hafu yeemail yako yese ichaenda kune akafa email maateri, urikubhadhara zvakapetwa kaviri zvaunofanirwa kuve neako email mutengesi. Kuchenesa zvinyorwa zvako kunoderedza yako ESP mutengo.
Targeting - Nekutsanangura vako vasinganetsi vanyori, iwe unogona kutumira zvakare-kubatidzira zvinopihwa zvakananga kwavari, tarisa kwavari pasocial media, uye ona kana uchigona kuti vadzokezve kuroorwa.
Relationships - Nekuve neyakachena runyorwa, iwe unoziva kuti iwe unobatanidzwa nevanyoreri vane hanya kuti iwe ugone zvirinani kutarisisa mameseji ako.
Reporting - Nekusanetseka nezve saizi saizi uye nekutarisa kubatanidzwa, unogona kuwana rakanyatsojeka dhata rekuti yako zvakanaka ekurera uye eemail zvirongwa ari kushanda.
Isu tinokurudzira vatinoshanda navo ku Neverbounce yako email yekuongorora sevhisi! Maalgorithms avo epamutemo uye yechitatu-bato ongororo yaita mutsauko wakakura mukuwaniswa kwevatengi vedu. Usamborega inopa kupihwa chibvumirano che97% chaiyo. (Inofanira kupfuura 3% yeemaimeri ako anoshanda apaza mushure mekushandisa sevhisi, ivo vanodzorera mutsauko.)
Neverbounce Zvimiro Zvinosanganisira:
12-Nhanho Yekuongorora Maitiro - Uchishandisa MX, DNS, SMTP, KUSANGANISIRA, uye humwe hunyanzvi hwekumisikidza huchokwadi hweateresi, yedu yekutenga-nhanho yekuongorora maitiro anoongorora email yega yega kusvika makumi manomwe neshanu kubva kwakasiyana - nzvimbo kutenderera pasirese.
Yemahara Yekushandisa Turu - Edza yako data pasina muripo. Tichazotaura zvakare kana zvakachengeteka kutumira kana zvichida kucheneswa neinofungidzirwa bounce rate. Semutengi weNeverBounce, iwe unoshandisa zvisingagumi chinhu ichi. Pamusoro pezvo, iwe unogona kuvaka yavo yemahara kuongororwa mukati meyako system kuburikidza neAPI yedu pasina muripo.
Yemahara Rondedzero Kukwesha - NeverBounce inopa mahara de-kudzokorodza uye yakaipa syntax kubviswa usati wapa iyo yakazara mutengo webasa rako. Hatimbobhadharise kukwesha.
Ivo Havambofa Vakashandisa Nhoroondo Dhata - Maemail anogara achichinja, uye nepo makambani mazhinji ekuongorora achichengetedza mutengo nekupa zvaitika kare, tinoongorora maemail ako nguva dzese, tichiona mhinduro yazvino uye chaiyo. Iine iyo inokurumidza kutendeuka nguva mubhizinesi, haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti uchenese uye uone runyorwa rwako.
Ongorora Yako Email Rondedzero Yemahara Izvozvi!
Iyi infographic kubva Email Mamongi zvakare inopa runyorwa rwematanho ekutora kuchenesa vanyoreri uye nekuchenesa yako email runyorwa zvakanaka.
Tags: vanoshanda vanonyorerabounce-backsemail yakachena rondedzerokuburitswaemail yakachenaemail kuchenesaemail mutengoemail mukurumbiraemail mariemail chidimbuemail service provideremail unyoreongororo yeemailkunyanyaesp mutengovasingashande vanyorikuchenesa vanyorerikutangazve kuita
Kupfuura maBlockers: Maitiro Ekuita Kuti Ads Ako Aone, Akadzvanya On, uye Kuitwa Pamusoro